Orinasa vita amin'ny hoditra suède, mpamatsy - mpanamboatra hoditra suède china
Ny hoditra suède mikrofiber dia manambatra ny tombon-tsoa amin'ny hoditra sy ny lamba, mamadika ny hevitra nentim-paharazana fa ny hoditra dia ambony noho izay rehetra ao an-tsain'ny mpanjifa, mandika ny lamba sentetika, mitondra fironana vaovao ho an'ny fiainana milamina sy milamina amin'ny tontolo iainana.
Fitaovana vita amin'ny hoditra Suede Microfiber ho an'ny fonon'ny seza fiara sy ny atitany auto
Ny microfiber polyester novokarin'i Bensen dia manana fahatsapana mitovy amin'ny an'ny hoditra mihintsana, fa tsy tena hoditra, fa hoditra synthetic microfiber.
Nonwoven Microfiber Suede Eco Synthetic hoditra ho an'ny fiara anatiny
Ny suède microfiber novokarin'i Bensen dia tsy manana DMF amin'ny fitsapana ny tontolo iainana. Izy io dia an'ny vokatra feno rano feno, tena tsy manimba ny fahasalaman'ny olombelona, ​​tsy misy fandotoana ny tontolo iainana.
Hoditra Suede tsara kalitao tsara ho an'ny haingon-trano anatiny fiara
Ny hoditra mikraoba dia manana tombony maro, toy ny fahalemem-panahy, fomba kanto, loko feno, fanoherana maharitra / abrasion, mora tazomina, sns. Ny hoditra suede dia saika ny tombony rehetra amin'ny hoditra sy ny lamba.
Malemy sy maharitra ny hoditra mikraoba vita amin'ny savony ho an'ny Auto Interiors
Ny hoditra suède microfiber dia vokatra avo lenta amin'ny ankapobeny, saingy tsy noho ny antony mitovy amin'ny karazan-koditra hafa. Ary ny fahalemem-panahy sy ny fahamendrehana no sarobidy tokoa.
Hydrolisis tahan'ny tantera-drano Suede PU synthetic Microfiber hoditra
Ny fanoloana Alcantara dia manana plastika tena tsara ary azo atao: familiana: ny familiana avy any Huracan dia nofonosina miaraka amin'i Alcantara fanoloana amin'ny andaniny roa mba hanatsarana ny fahatsapana sy hampitomboana ny fifandirana, tontonana anatiny, seza, fonosana (kitapo hoditra, firakofana boaty firavaka koa hampiasaina Alcantara), fitaovana elektronika, (Surface Pro 4's keyboard part using Alcantara replacement material)
Red Microfiber Suede Goat synthetic Suede Cars hoditra
Ny savaivony microfiber dia kely dia kely, ka ny hamafin'ny hiondrika dia kely dia kely, malefaka indrindra ny fahatsapana fibre.
Tsara kalitao Auto Suede lamba PU Microfiber hoditra
Ny suède dia vita amin'ny microfiber ary manana faritra malefaka.
0.7 - 0.8mm matevina automatique vita amin'ny lamba maotera
Bensen dia orinasa mpamokatra suede faux-friendly izay afaka manome fomba sy loko maro karazana suede faux. Raha ampitahaina amin'ny tena hoditra, ny suède faux dia manana fanoherana mahery vaika kokoa, fanoherana rano, fanoherana tasy ary hafanana rivotra. Ity dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny haingon-tranoo.